ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ယခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုများ မှတ်တမ်းတင် အစီအစဉ် (အယ်လ်ဂျာဇီးယားရုပ်သံ)
ယခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုများ မှတ်တမ်းတင် အစီအစဉ် (အယ်လ်ဂျာဇီးယားရုပ်သံ)
Al Jazeera မှ တင်ဆက်သည့် ကန့်လန့်ကာအကွယ်မှ မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်မှုကြီး ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း (The Hidden Genocide)
Al Jazeera သတင်းဌာနမှ ကြော်ငြာချက်တွင် ပရိသတ်များ စောင့်ကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ရန် တိုက်တွန်းထားကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
အစီအစဉ် ရိုက်ကူးသူ Mr. Phil Rees မှ ထိုအစီအစဉ်ပြီးသည်နှင့် အွန်လိုင်းတွင် မေးမြန်းလာသည့် မေးခွန်းများကို ဖြေကြားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အချိန်အတိအကျကို Al Jazeera အင်တာနက်စာမျက်နှာ Al Jazeera website တွင် အတည်ပြုကြေညာမည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
Mr. Phil Rees က မှတ်တမ်းတင်သတင်းရုပ်ရှင်တွင် ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်ခံရသော နေရာများ၊ ဒုက္ခသည်စခန်းများအကြောင်း ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများ စုစည်းနိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို လုပ်ခဲ့တာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေမှာ မဖြေရှင်းရသေးတဲ့ မှုခင်းဆေးပညာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေလို့ ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ ပထမဆုံး သက်သေခံချက်တွေကို တဆင့်ကြားတဲ့သူတွေထက် ကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့သူတွေဆီက ဖြစ်အောင် ကျိန်းသေအောင် လုပ်ယူခဲ့တယ်။ ကြည့်ရှုသူတွေ အခြေအနေမှန်ကို ရှာဖွေတွေ့ ရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော် မျှော်လင့်ပါတယ်။”
ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာ လက်ထောက်အတွင်းရေးမှုးချုပ် ဗလာရီအာမိုးစ်က ပြည်တွင်း ဒုက္ခသည်စခန်းများ၏ အခြေအနေမှာ “အလွန့်အလွန် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာဖြစ်သည်” ဟု ပြောကြားအပြီး Al Jazeera နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတို့၏ အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်မှုကိစ္စများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သေးသည်။
တွေဆုံခြင်းအတွက် မေးလ်ပို့ တောင်းခံနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
ကိုးကား - http://aljazeerapressoffice.tumblr.com/
(Zayar Paing Soe ၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှ ...)
There is no evidence in this movie to prove the happening as they said.
The eyes of the story tellers are revealing the truth as they are liars. We haven't seen the involvement of security forces in that movie except telling of liars.
ကုလား ငလိမ်တွေ... ကြက်သရေတုန်းလိုက်တာဗျာ... ၀ိုင်းပီးကန့်ကွက်ကြပါ...
Zarni Ye Tun said...
သောင်းချီတဲ့ သိန်းချီတဲ့ ကုလားတွေ စစ်တွေမှာသောင်းကျန်း နေတာကို ရခိုင်လုပ်သလို ရိုက်။ ဘာမေးခွန်းတွေ မေးထားမှန်းမသိပဲ အဖြေတွေကြီး ဖြတ်တင်ထားတဲ့ Documentary ။ တစ်အိမ်ဝင် တစ်အိမ်ထွက် မီးရှို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ကောင်တွေက ငိုပြ ။ စစ်တပ်နဲ့ ရခိုင်ပြည်သူတွေကို အပြစ်တင် ။ ရခိုင်မျိုးနွယ်စုတဲ့ ပြီးတော့ ဘင်ဂါလီစကားပဲ ပြောတတ်တယ်။ ရခိုင်စကား ဗမာစကား မတတ်။ ဒါကို ကုလားဖက်က နေပြီး လွဏ်းဆွေ က ကန့်လန့်ကာအကွယ်မှ မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်မှုကြီး လုပ်။ ငါဘင်ဂါလီ တွေကို ရွံတယ်။ ဘင်ဂါလီ အလိုတော်ကြီး လွဏ်းဆွေကား မစင်ထက် ရွံရှာဖွယ် ကောင်းလှချီတကား ။
မိတ်ဆွေတို့ အယ်ဂျာဇီးရားမှာ အချက်ကျကျ သွားကန့်ကွက်ပေးကြပါ။
ပြသနာက သူတို့က စပြီး သူတို့ ဘာသာက ငြိမ်းချမ်းတယ်နဲ့ အသံကောင်းဟစ်နေတယ်။
ပရိပက္ခတစ်ခုမှ ၂ဘက် ပြောတာ တင်ရမယ် ခုက ကုလားတွေပြောတာပဲ ပါတာ မရိုးသားတာ။
ဝိုင်းကန့်ကွက်ကြပါဒီမှာပြောတာ ဗမာစာတတ်သူပဲ ဖတ်မိမှာ
သူတို့ ဝက်ဆိုက်မှာ သွားရေးတော့ သူတို့လိမ်တာ နိုင်ငံတကာသိမှာ
King Soe said...
ရုတ်တိမရှိဘာဘူး..ဘာအထောက်အထားမှမယ်မယ်ရရမရှိဘာဘူး ပြောတဲ့ သူတွေကိုပေါ့..Mr.Phil ကမေးခွန်းတွေကိုပြန်ဖြေမယ်ပြောတယ်..website မှာရှာတော့ ဘာမှမတွေ့ ဘူး..email ရှိရင်ပေးကြပါ..ကျွန်တော်ကရခိုင်မဟုတ်ဘာဘူး..ပြန်မေးချင်လို့ ပါ..ဆက်ဆက်ပေးကြပါ..
first, AlJezera plz do not try to make tragic stories out of your power mixing with facts.
Second, the word ' genocide' is clearly not applicable in this one as it is not. You are wanting it to be one.
third, you should take those miserable people to your countries and better make them proud of you in this way. Then, peace will bloosm for both of those groups.
All should write objection on the feedback of that channel.
Khin Maung said...
If you want the truth of this genocide, allow international investigation team come and investigate details. Why do not dare to international investigation come and investigate.
If it continue, our blood is really red.
It is methodical and Systematic killing of innocent people. Mastermind was Ex-General(Army) and acomplices are few Yakhine monks and the monk named "Wirathu". Investigate and charge them in Criminal Court.
မင်းတို့ အလှည့်ကျ မငို မိအောင် ကြိုးစားထား လူသားချင်းချင်း ကို ဒီလောက်ထ်ိလုပ် စရာ မလိုဘူး။
ပြော ရင် လဲ ကုလား ကုလား နဲ့ ပြောနေတဲ့ ဘုန်းကြီးကို မေးချင်တယ် ခင်ဗျား ရှိခိုး ပြီး ဆရာတင်ထား တဲ့ ဂေါတမ က ကုလား လား တရုတ်လား ဗမာ လား တချက်လောက် ပြောကြည့်ပါ
ဒါကြောင့် ခင်ဗျား တို့ ဘုန်းကြ၊ီးတွေကို စစ်တပ်က ချတာ